Komishanka oo Caawa Liiska 25 Xubnood G/Deegaanka Hargeysa u gudbiyay Maxkamadda | Somaliland.Org
Komishanka oo Caawa Liiska 25 Xubnood G/Deegaanka Hargeysa u gudbiyay Maxkamadda
December 15, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)-Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka ee Degmada Hargaysa Siciid Jaamac ayaa caawa mar kale waxa uu shaaca ka qaaday dib u sixidii ay ku sameeyeen natiijadii doorashada ee Caasimada Hargaysa isla markaana ay u gudbiyeen Maxkamada Gobolka Maroodi jeex,oo ansixin karta natiijadan marka ay ku qanacdo.
Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka ee Degmada Hargaysa waxa uu sheegay in natiijadan ay dib u sixida ku sameeyeen aanay waxba ka badalin saamiga ay Xisbiyada iyo Ururada Siyaasadu kala heleen.
Guddoomiyuhu waxa uu cadeeyay in waxa keliya ee is bedelay ay tahay laba Murashax oo ay markii hore shaaciyeen inay ku soo baxeen doorashada oo ay dib u tirintii danbe ku saxeen isla markaana ay soo saareen cidii ku soo baxday. Kuwaasi oo ka soo kala jeeda ururadda RAYS iyo Dalsan.
“Waxaanu 6-dii Bishan ku dhawaaqnay natiijadda doorashada deegaanka Hargeysa, haddana 8-dii bishan ayaanu ogaanay in tiradii macluumaadkii Faro-weyne laba qorantay. markaa waxaanu komishan ahaan ka saarnay tiradii laba jeer qorantay. waxaanan maanta u gudbinay Natiijadii maxkamadda Gobolka Hargeysa waxaanay marka ay ku qanacdo qaraar lagu camal falo ka soo saari doonta,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Komishanka degmadda Hargeysa.
Waxa kale oo uu beeniyay hadalo ka soo yeedhay qaar ka mid ah murashaxiintii hadhay oo warbaahinta ka sheegay in xisbiyadda iyo ururadu ay soo xuleen saamiga xildhibaanadda ay ka heleen degmadda Hargeysa.
“Ma Jirto Xildhibaano ay soo xusheen axsaabtu iyo xildhibaano la is weydaariyay midna,”ayuu yidhi Siciid Jaamac.
Magacyada Xildhibaanada Cusub ee Golaha Deegaanka ee Komiishanku ku dhawaaqeen,waxay magacyadoodu kala yihiin.
Dhawaqan Komishanka degmada Hargaysa ayaa ka danbeeyay kadib markii ay Maxkamada Gobolka Maroodijeex, dib ugu celisay Komiishanka Doorashooyinka Natiijadii ay soo saareen 6dii bishan aynu ku guda jirno ee 2012.
Previous PostObama Oo Ilmadda Hoorsaday markii xasuuq ka dhacay dugsi Hoose oo ku yaala ConnecticutNext PostMaxkamadda Hargeysa oo soo Ansixisay Liiska Goleyaasha deegaanka Gobolka maroodi-jeex	Blog